बिहानै खाली पेटमा खानुस् २ वा ४ केस्रा काँचो लसुन ! – Rapti Khabar
बिहानै खाली पेटमा खानुस् २ वा ४ केस्रा काँचो लसुन !
लसुनले थुप्रै रोगहरुबाट बचाउँछ । बिहान सबेरै लसुनको सेवन गुणकारी मानिन्छ । खाली पेटमा दुई वा चार केस्रा लसुनको सेवनले मधुमेह, जोर्नी दुखाई जस्ता समस्यामा आराम हुन्छ ।
यतिमात्र होइन लसुनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ । लसुनमा थुप्रै गुणहरु हुन्छन् । यसले शरीरलाई निरोगी राख्न सहयोग पुर्याउँछ । र शरीरलाई उर्जा पनि प्रदान गर्छ ।
बिहानै २ वा ४ केस्रा काँचो लसुन नियमित रुपमा खाँदा जोर्नीहरु दुख्ने समस्याबाट आराम मिल्ने आयुर्वेदिक विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । यसैगरी, रगतमा चिनीको मात्रासमेत नियन्त्रण गर्ने भएकाले मधुमेहका विरामीका लागि राहत मिल्छ ।
यसैगरी, लसुनको सेवनले छालासम्बन्धी समस्याहरुबाट पनि छुटकारा मिल्छ । यसले ‘फङ्गल इन्फेक्शन’ बाट बचाउँछ । लसुन पेटमा ग्यास भरिने समस्या, कब्जियत, उच्च रक्तचाप, रुघाखोकी, दम, निमोनिया र ब्रोन्काइटिस जस्ता समस्याहरुका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
यति मात्र होइन, कुन रोगका बिरामीले कसरी लसुन सेवन गर्ने भन्ने विधि थाहा भएको खण्डमा यसले मानिसको शरीरलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । कानमा दुखेमा तोरीको तेलमा लसुनको केस्रो हल्का तातो बनाएर कानमा राख्दा आराम मिल्छ ।
यसैगरी, नसाको विरामीहरुका लागि दुधमा लसुन उमोलेर पिउँदा नसा कमजोर हुँदैन । लसुनले रक्तसञ्चार नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापका विरामीले खानी पेटमा लुसन खानुपर्छ ।
अत्यधिक कपाल झरिरहेको छ ? पेटसम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ, खानुस् यी खानेकुरा
कपाल झर्दा जो कोहिलाई पनि चिन्ता लाग्न सक्छ । सुन्दरताका लागि स्वस्थ्य कपाल पनि कुन आवश्यक छ । यदि कपाल टुक्रिन वा झर्न थाल्यो भने स्वास्थ्य समस्या भएको हुनसक्छ ।
वास्तवमा स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार कपाल झर्ने समस्या खानेकुरा र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यदि तपाईंको खाना स्वस्थ्य छ भने तपाईंको कपाल पनि स्वस्थ्य हुन्छ ।
पेटमा कुनै पनि समस्या छैन भने कपाल झर्ने समस्या पनि हुँदैन । हाम्रो शरीरको पूरासम्बन्ध पेटसँग हुन्छ । यदि शरीरको एक अंगमा समस्या छ भने त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्को अंगमा पर्छ । त्यस्तै, पेटसम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याका कारण शरीरका पूरै अंगलाई असर पर्छ ।
पेटको स्वास्थ्य समस्याका कारण कपालमा पनि थुप्रै समस्या देखापर्छन् । अनुसन्धानका अनुसार एक स्वस्थ्य आन्द्राले अलग–अलग माइक्रोअर्गानिज्म (सुक्ष्मजीव) लाई स्वस्थ्य राख्छ । यसको असर शरीरिक प्रक्रियामा पर्छ । त्यस्ता प्रतिक्रियाका असर दिमागसँगै कपालमा पनि पर्छ ।
पेटसम्बन्धी स्वास्थ्य आन्द्रासँग सम्बन्धित हुन्छ । आन्द्रा सामान्य एलिमेन्टरी नली होइन, यो जटिल पारिस्थितिक तन्त्र पनि हो । आन्द्रालाई दोस्रो मस्तिष्क पनि भनिन्छ । आन्द्राको सम्बन्ध न्युट्रियन्स, हर्मोन र रोगप्रतिरोधसँग हुन्छ । र, यी सबैलाई एक ठाउँमा मिलाउने काम गर्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, यसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रुपमा कपाल झर्ने समस्यासँग हुन्छ ।
आन्द्रा र कपाल झर्ने समस्याको सम्बन्ध
हाम्रो पेटमा हजारौं प्रजातिका ब्याक्टेरिया हुन्छ । जसले पाचन प्रक्रियामा सहायता पुर्याउँछ । यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई पनि नियन्त्रित गर्छ । यद्यपि, राम्रो ब्याक्टेरियाले माइक्रोबियल एन्जाइमलाई बढाउने काम गर्छ जसले सुक्ष्म पोषक तत्व पैदा गर्छ ।
यीनै तत्वहरुलाई शरीरका पूरा अंगले प्रयोग गर्ने गर्छ । खानामा भिटामिन के, भिटामिन १२, भिटामिन ३, फोलिक एसिड र बायोटिनलाई कपालसम्म पुर्याउने काम गर्छ । यसले नै कपालको स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । त्यसैले शरीरमा राम्रो ब्याक्टेरिया नभएमा कपाल कमजोर हुन्छ र झर्न सुरु हुन्छ ।
कपालमा हर्मोनको असर
आन्द्राको माइक्रोबायोटाले शरीरको हर्मोन नियन्त्रित गर्छ । जसमा एस्ट्रोजन, थाइराइड हर्मोन र मेलाटोनिन समावेश हुन्छ । यसले आन्द्राको फ्लोरा हर्मोनलाई पनि नियन्त्रित गर्छ । जसले कपाल झर्न, बढाउन र नयाँ पलाउने जस्ता प्रक्रियालाई असर पुर्याउँछ । त्यसैले यदि कुनै हर्मोनमा परिवर्तन आएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर कपालमा पर्छ ।
कपाललाई स्वस्थ र राम्रो बनाउनका लागि भिटामिन र माइक्रोन्युट्रिएन्टसयुक्त खाना खानुपर्छ । जसको लागि फलफूल, बदाम, हरिया सागसब्जी, माछा, दुब्लो मासु र अण्डा जस्ता खानेकुराहरु खाने गर्नुपर्छ ।
यसले पेट र कपाललाई स्वस्थ राख्छ । यसका साथै उच्च फाइबरयुक्त खाना खानुपर्छ । साथै, अर्गानिक र प्राकृतिक खानेकुरा खानुपर्छ । प्रोबायोटिकयुक्त खानेकुराहरु पनि खाने गर्नुपर्छ । यसले कपाल मात्र होइन पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधान गर्छ ।
भुलेर पनि रातमा खानुहुँदैन दही, हुनसक्छन् यस्ता स्वास्थ्य समस्या
सामान्यताः मानिसहरु गर्मीको समयमा धेरै दही खाने गर्छन् । दही खान मन पराउने मानिसहरु रातमा पनि दही खाने गर्छन् । तर, कमैलाई मात्र थाहा छ, रातको समयमा दही खानु स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुनसक्छ । दहीले शरीरमा विपरित गतिविधिहरु गराउँछ । जसले शरीरमा गलत प्रभाव पार्दछ ।
रातमा दही खानुका नोक्सानहरुः
रातिमा दही खाँनु पाचन प्रक्रियाविरुद्ध हुनसक्छ । जसले गर्दा रातिमा बान्ता पनि हुनसक्छ ।
शरिरमा म्युकस बन्न सक्छ
रातिको समयमा दही खाँदा शरीरमा म्युकसको माधामा वृद्धि हुन्छ । जसले गर्दा खोकी र चिसो लाग्दा ज्वरो समेत आउँन सक्छ ।
यदि दही दुई हप्ताभरी नियमित रुपमा खाँदा अनुहारमा डन्डिफोर आउँन सक्छ । त्यसैले रातमा दही खाँदा विचार गर्नुपर्छ ।
तौल बढ्न सक्छ
रातमा दही खाँदा तौल बढ्न सक्छ । साथै, दही खाँदा कब्जियत पनि हुनसक्छ ।
जोर्नी दुख्ने समस्या
जो व्यक्तिमा जोर्नी दुख्ने समस्या हुनसक्छ । त्यसैले रातिमा दही खानुहुँदैन । रातिमा दही धेरै खाँदा जोर्नीको समस्या हुनसक्छ ।
बिहे गर्नु अघि युवतीलाई सोध्नैपर्ने ५ महत्वपूर्ण प्रश्नहरु जानी राखौ
टिप्स । आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्न नभुल्नु होला ताकी पछी आफ्नो परिवारिक सम्बन्धका कुनै समस्या नआओस् । बिहे अघिनै एक-अर्काको आनीबानी थाहा नभएपनि त्यस सम्बन्धि सावधानी अपनाउनु निकै बुद्धिमानी हुन्छ । बिहे पछि […]
प्रतिरोधी क्षमता बढाउने औषधिको बिक्री पाँच गुणासम्म बढी, आफैं किनेर खानु कति ठीक ? हेर्नुस
समिक्षा अधिकारी/सेतोपाटी काठमाडौं, कात्तिक ४, कोरोना महामारी फैलिएसँगै मान्छेहरू भिटामिन–सी, डी र जिंक चक्की किनेर खान थालेका छन्। पछिल्ला दुई-तीन महिनायता यी औषधिको बिक्री ह्वात्तै बढेको बिक्रेताहरू बताउँछन्। सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएको मान्छेलाई भिटामिन–सी, डी र जिंक चक्की खान आवश्यक पर्दैन। कसैलाई डाक्टरले जाँचेर उसको शरीरमा यी तत्व कम भए खान सुझाव दिन्छन्। वा कसैलाई […]
पुनर्नियुक्तिबारे धेरै हल्ला चलेपछि कुलमान घिसिङले निकाले विज्ञप्ति (पूर्णपाठ)
काठमाडौंमा एउटै तरकारीको मूल्यमा देखियो यस्तो चमत्कार